काठमाडौं । यो वर्ष रिलिज भएका दुई बलिउड चलचित्र ‘भारत’ र ‘कविर सिंह’ले बक्स अफिसमा निकै राम्रो व्यापार गरे । समिक्षात्मक रुपमा पनि चलचित्र राम्रो ठहरिएका थिए । ‘भारत’बाट नायक सलमान खानको निकै तारिफ......
एजेन्सी, मुम्बई । शाहिद कपुर अभिनित ‘कबीर सिंह’ उनको करियरकै सर्वाधिक हिट सिनेमा बनेको छ । सिनेमा हिट भएसँगै यसले बलिउडका केहि ठूला स्टारका सिनेमाको कमाइलाई पनि उछिनेको छ । सिनेमाले भारतको घरेलु वक्सअफिसमा......
काठमाडौं, १७ असार । इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) को आयोजनाको बिषयलाई लिएर नेपालमा तिव्र बहस भइरहेको छ। सरकारका मन्त्री र नेपाल पर्यटन बोर्डले आइफाको २० औँ संस्करणको आयोजनाले राष्ट्रिय गौरव बढ्ने दाबी......
एजेन्सी । भारतीय अभिनेता अर्जुन कपूर र मलाइका अरोडाको सम्बन्धको चर्चा पछिल्लो समय चुलिएको छ। दुवैलाई अहिले एकैसाथ देखिने गरिएको छ। उमेरको विषयमा गरिएको टिकाटिप्पणीप्रति मलाइकाले जवाफ दिँदै कुनै पनि सम्बन्धमा उमेरभन्दा पनि मन......
काठमाडौं । चर्चित बलिउड जोडी अभिनेता टाइगर श्राप र अभिनेत्री दिशा पटानीबीच ‘ब्रेक अप’ भएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमले उनीहरुको ‘ब्रेक अप’ भएको समाचार सार्वजनिक गरेका छन् । यो जोडी बलिउडको आदर्श जोडीका......
सम्बन्धविच्छेदपछि मस्त ‘एन्जिलिना’
एजेन्सी । हलिउड अभिनेत्री एन्जेलिना जोली ब्राड पिटसँगको सम्बन्धविच्छेदपछि खुसी छिन्। यी दुईले सन् २०१६ मा १२ वर्षको सम्बन्ध औपचारिकरूपमा समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए। आफ्नो सन्तानको साथमा सँधै खुसी रहने उनीहरू अहिले आ–आफ्नो......
अमिताभ बच्चनको अहिलेसम्मकै फरक लूक्स
काठमाडौं । अभिनेता द्वय अमिताभ बच्चन र आयुष्मान खुरानाको नयाँ फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’को छायांकन कार्य सुरु भएको छ। छायांङ्कनकै क्रममा रहेको यो चलचित्रले चर्चा पाउन थालेको छ। फिल्मको टिम अहिले लखनऊमा छ र धमाधम......
रणवीरमाथि लाग्यो चोरीको आरोप
लन्डन, ६ असार । बलिउड अभिनेता रणवीर सिंहमाथि चोरीको आरोप लागेको छ। रणवीरलाई डब्लुडब्लुईका म्यानेजर पल हेमैनले चोरीको आरोप लगाएका हुन्। उनले रणवीरमाथि आफ्नो भनाइ चोरेको आरोप लगाएका हुन्। कपिलदेवको वायोपिक सिनेमा ‘८३’को तयारी......
प्रियंका चोपडाको साडी
बलिउड, ५ असार । अमेरिकी गायक निक जोनाससँग विवाह गरेर रमाइरहेकी बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा यतिबेला आफ्नो गलत भिडियोका कारण चर्चामा छिन्। उक्त भिडियोमा प्रियंकाले अमेरिकी युवतीहरूलाई साडी लगाउन सिकाउने क्रममा गरेको एउटा नृत्य......
‘पीकु’मा काम नगर्नु जिन्दगीकै ठूलो गल्तीः परिणिती चोपडा
एजेन्सी । सन् २०१५ मा रिलिज भएको ‘पीकु’ निकै सफल चलचित्र हो। यो चलचित्रबाट नायिका दीपिका पादुकोणले धेरै अवार्डहरु जितेकी थिइन्। यस चलचित्रमा दीपिकाले नायक इरफान खानको जोडी भएर काम गरेकी थिइन्। र, यसमा......
बलिउडकी प्रियंकाको राजनीति गर्ने इच्छा ! के होला पुरा ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले अमेरिकी पप गायक निक जोनसका साथ विवाह गरेसँगै हरेक दिन कुनै न कुनै कुराका कारण खबरमा छाइरहेकी हुन्छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले शेयर गरेका तस्बीर तथा उनले कुनै......
उर्वशीको मस्त जवानी
काठमाडौं । अभिनेत्री उर्वशी राउटेला धेरै जसो चर्चामा आइरहने नाम हो । उनले सार्वजनिक गरेका सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामका फोटोहरु धेरै हेरिने मध्येमा पर्छन् । उनका फोटो हेर्नेहरु पुनः उनलाई फलो गर्न लागिहाल्छन् । यसको......
अनुष्का शर्मा गम्भीर बिरामी
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री अनुष्का शर्मा गम्भीर पीडामा छिन् । भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेअनुसार बल्जिङ डीस्क नामक रोगबाट ग्रसित उनी हालै अस्पतालको अगाडि भेटिएकी थिइन् । बल्जिङ डीस्क रोगले च्यापेपछि कम्मरको हड्डी दुखेर......
कान्सको रेड कार्पेटमा ऐश्वर्याको ‘मत्स्यकन्या’ लुक
काठमाडौं, ६ जेठ । बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनले कान्स फिल्म फेस्टिभलको रेड कार्पेटमा धमाका मच्चाएकी छिन् । हरेक वर्ष नयाँ र फरक पहिरनमा देखिने ऐश्वर्याले यस पटक ‘मत्स्यकन्या’को रुप धारण गरेर रेड कार्पेटमा......
२६ बर्षकी सेलेनाले बिहे गर्दैछिन ६८ वर्षिय बिल मुर्रेसँग
चर्चित गायिका ताथ नायिका सेलेना गोमेजले ‘द डेड डोन्ट लाइ’ का सहकर्मीसँग आफूले विवाह गर्न लागेको बताएकी छिन् । सेलेनाले ‘द डेड डोन्ट लाइ’का सहकर्मी बिल मुर्रेसँग विवाह गर्न लागेको खुलासा इन्टाग्राम मार्फत् गरेकी......
२५ बलिउड सेलिब्रिटीका वास्तविक ‘रूप’
एजेन्सी । हामी कुनै म्यागजिन हेर्छौं वा सेलिब्रिटीको इन्स्टाग्राम वा ट्वीटर अकाउन्ट खोल्छौं तब उनीहरुको सुन्दरतामा धेरैजसो मत्रमुग्ध हुन्छौँ । हामीले सोच्छौँ कि यस्तो सुन्दरता अरूमा कहाँ ? तर, ति कयौं सुन्दर रूपहरु मेकअपपछि......
अक्षय कुमार क्यानडाको नागरिक भएको खुलासा
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित नायक अक्षय कुमारको नागरिकताको बिषयलाई लिएर अहिले भारतमा ठूलै चर्चा भैरहेको छ । ट्विटरमा अक्षयको नागरिकतालाई लिएर चर्चा ठूलो छ । भारतमा जारी लोकसभा चुनावमा केही दिन अगाडि बलिउडका अधिकांश......
विश्वकै सुन्दर अभिनेत्री एरियल चर्चाको शिखरमा, कारण यस्तो छ…
एजेन्सी । विश्वकै सुन्दरकोटीकी अभिनेत्रीका रुपमा चर्चा कमाएकी हलिउड अभिनेत्री एरियल विन्टरका सार्वजनिक भएका तस्वीरहरुले उनलाई चर्चाको शिखरमा पु¥याएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जाललगायतमा हङगामा मच्चाएको ती तस्वीरहरु साँच्चै हट र सेक्सी लुकमा छन्......
बिवाहका लागि रणबीर कपूर र आलिया ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्दै
काठमाडौँ । बलिउडका चर्चित अभिनेता रणबीर कपुर र अभिनेत्री आलिया भट्टको विवाह बारे हल्ला बाहिरिएको छ । फिल्म ब्रम्हास्त्रको शुटिङका क्रममा यी जोडी नजिकिएका थिए । अहिले आएर यी जोडीको हालै गोप्य इनगेजमेन्ट भएको......
विश्व सुन्दरी ऐश्वर्याले गरिन् आत्महत्याको प्रयास !
मुम्बइ, १४ वैशाख । करन जोहरको फिल्म ‘ऐ दिल हे’ मुस्किलमा दिएको बोल्ड सिनका कारण बच्चन परिवार र ऐश्वर्याको सम्बन्ध निक्कै बिग्रिएको थियो । पाल्र्हो अनलाइन मिडियाका अनुसार फिल्म रिलिज हुनुपुर्व पनि ऐश्वर्यालाई लिएर......